အလုပ်နှင့်ယှဉ်သော အားကစားအာဟာရ | Suplementos Brasil သို့ အာဟာရပညာရှင်ထံ မသွားမီ ခြားနားချက်ကို သိပါ။
Functional Nutrition ဆိုတာ ဘာလဲ။
အာဟာရပညာရှင်တစ်ဦးသည် သင့်အား ကြွက်သားထုထည်ရရှိရန် မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။
အာဟာရပညာရှင်က ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲ။
သဘောတူညီချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အာဟာရပညာရှင်ကို ဘယ်မှာ ရှာရမည်နည်း။
အာဟာရဗေဒပညာရှင်သည် အွန်လိုင်းတွင် တက်ရောက်နိုင်ပါသလား။
အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုဖြင့် အာဟာရပညာရှင် (Larissa Scharf အာဟာရပညာရှင်)
ဘယ်အချိန်မှာ အာဟာရပညာရှင်ကို ရှာရမလဲ။
အလေးချိန်တိုးခြင်းနှင့် အလေးချိန်တိုးခြင်းတို့ကို အာရုံစိုက်ပါ။
အမျိုးအစား ၁ နှင့် ၂ ဆီးချိုရောဂါကိုအာရုံစိုက်ပါ။
ကိုယ်ဝန်ဆောင် အမျိုးသမီးများကို အာရုံစိုက်ပါ။
အားကစားခန်းမ / အားကစားအာဟာရပညာရှင်အတွက်
အာဟာရပညာရှင်၏ အရေးပါမှုသည် ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးတွင် တိုးများလာနေပြီး၊ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ၊ အစာ ကျန်းမာခြင်းသည် ယနေ့ခေတ်တွင် ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ၀ကို ပိုမိုကျယ်ပြန့်စေပါသည်။
မြင့်တက်လာနေသော်လည်း၊ ဤပညာရှင်၊ ဤလှုပ်ရှားမှုနယ်ပယ်နှင့် မည်သည့်အချိန်တွင် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမည်ကို သံသယများစွာ ရှိပါသည်။
ဤဆောင်းပါး၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ သင်သည် အာဟာရပညာရှင်ထံသို့ မသွားမီ ရှုပ်ထွေးမှုများစွာကို ဖြစ်စေသည့် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အားကစားဆိုင်ရာ အာဟာရအကြား ခြားနားချက်ကို ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
အဲဒါနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အားလုံးသိချင်ပါသလား။ ဒါဆို သွားကြရအောင်။
Functional Nutrition ဆိုတာ ဘာလဲ။ ? Functional Nutrition သည် 1990 ခုနှစ်များအတွင်း အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင် ပေါ်ပေါက်ခဲ့ပြီး ရာစုနှစ်အစပိုင်း၌ ဘရာဇီးနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိခဲ့သော အာဟာရနယ်ပယ်ကြီး၏ ချဉ်းကပ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
ဤအာဟာရဆိုင်ရာချဉ်းကပ်မှု၏ အကြီးမားဆုံးကွာခြားချက်တစ်ခုမှာ လူနာတစ်ဦးစီ၏ တစ်ဦးချင်းစီနောက်ဆက်တွဲကို ပိုမိုလုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။
အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ၎င်းသည် လူတစ်ဦး၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာသွင်ပြင်များကိုသာမက ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာ ရှုထောင့်များကိုလည်း ထည့်သွင်းစဉ်းစားသောကြောင့် ယင်းမှာ ၎င်းတို့၏ အလေ့အကျင့်များ၊ အလေ့အထများ၊ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များ၊ ၎င်းတို့လုပ်ဆောင်သည့် အလုပ်နှင့် အခြေအနေ မည်သို့ရှိသနည်း။ သင့်ရဲ့ကျန်းမာရေး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ။
စနစ်အားလုံးကြားတွင်ရှိသော အပြန်အလှန်အကျိုးသက်ရောက်မှုများကို ညွှန်ပြရန်အတွက် အကျယ်တဝင့်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပါသည်။ အစာ တစ်ဦးချင်း စားသုံးရန် မှန်ကန်သည်။
ထို့ကြောင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာဖြစ်သော အာဟာရသည် လူနာတစ်ဦး၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ သုခချမ်းသာကို အမြဲတမ်း ရည်မှန်းပြီး အစားအသောက်နှင့် စားသောက်မှုအလေ့အကျင့်များကို ညွှန်ပြခြင်းဖြင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝအရည်အသွေးကို ရရှိစေမည်ဖြစ်သည်။
အားကစားအာဟာရဆိုတာဘာလဲ ? အားကစားအာဟာရကို အစာစားခြင်းနှင့် ကစားခြင်းတို့တွင်သာမက အားကစားနှင့်ပတ်သက်သည့် အာဟာရနည်းလမ်းအဖြစ် ဖော်ပြနိုင်သည်။ အားကစားသမား ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသာမက အပျော်တမ်းများနှင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများကိုသာ လေ့ကျင့်ကြသူများဖြစ်သည်။
ထို့ကြောင့် ဤနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်သော ပရော်ဖက်ရှင်နယ်များသည် အာဟာရ၊ ဇီဝဓာတုဗေဒနှင့် ဇီဝကမ္မဗေဒဆိုင်ရာ အသိပညာများကို ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုများကို လေ့ကျင့်ရာတွင်-
A ပြန်လည်ထူထောင်ရေး လေ့ကျင့်ခန်းလွန်
အာဟာရပညာရှင် အစုလိုက်အပြုံလိုက်ရရှိ ကြွက်သား
အာဟာရပညာရှင်က လူနာကို အကျိုးပြုတယ်။ ကြွက်သားထု ဖန်တီးမှုအားဖြင့် အစားအသောက်များတွင် အာဟာရလိုအပ်ချက်များနှင့် ရည်မှန်းချက်များအပေါ်အခြေခံသည်။ အာဟာရပညာရှင်တစ်ဦးသည် သင့်အား ကြွက်သားထုထည်ရရှိရန် မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။.
ကြွက်သားများပိုမိုရရှိလိုသူအတွက် အစားအသောက်သည် ပရိုတင်းဓာတ်ကြွယ်ဝသော အစားအစာများကို ပိုမိုအာရုံစိုက်သင့်ပြီး အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ ဖြူဖြူ ပရိုတင်း။
>>> ဖတ်ရန် Ephedrine: ဒီအငြင်းပွားဖွယ်ပစ္စည်းဥစ္စာအကြောင်းကိုအားလုံးလေ့လာပါ!
ဘယ်သူလိုချင်လဲ ဝိတ်ကျ မကောင်းတဲ့ ကယ်လိုရီမျှတမှုကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အစားအသောက်တွေ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင် ကူညီပေးနိုင်ဖို့ အာဟာရပညာရှင်ကို ရှာဖွေသင့်ပါတယ်။ အာဟာရပညာရှင်က ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲ။ အဲဒါက ကူညီပေးလိမ့်မယ်။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျ.
ထို့အပြင်၊ အာဟာရပညာရှင်တစ်ဦးသည် သာမိုဂျင်ဓာတ်နှင့် အာဟာရဓာတ်များကဲ့သို့သော ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်းကို ပိုမိုထိရောက်စွာ ကူညီပေးသည့် သဘာဝဖြည့်စွက်ဆေးများကိုလည်း ညွှန်းပေးနိုင်သည်။ အစာစားချင်စိတ်ကို ထိန်းပေးသည်။.
သဘောတူညီချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အာဟာရပညာရှင်ကို မည်သည့်နေရာတွင် ရှာရမည်နည်း။ ? ယနေ့တွင် Doctoralia ကဲ့သို့ပင် သဘောတူညီချက်ဖြင့် အလုပ်လုပ်သော အာဟာရဗေဒပညာရှင်များကို ရှာဖွေရန် အချို့သောဝဘ်ဆိုဒ်များကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
အခြားရွေးချယ်စရာမှာ အချိန်အများစုတွင် ဤအချက်အလက်ရှိနေသည့် အလိုရှိသော အာဟာရပညာရှင်၏ ဝဘ်ဆိုက်တွင် ရှာဖွေရန်ဖြစ်သည်။
ဟုတ်တယ်၊ လောလောဆယ် အာဟာရပညာရှင်သည် အွန်လိုင်းတွင် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။ ကွန်ပြူတာ သို့မဟုတ် ဆဲလ်ဖုန်းဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်သော ဗီဒီယိုခေါ်ဆိုမှုများမှတစ်ဆင့် လူနာများနှင့် အွန်လိုင်းစောင့်ရှောက်မှုလုပ်ဆောင်ရန် နည်းပညာဆိုင်ရာ နည်းလမ်းအမျိုးမျိုးကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
အာဟာရဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်များသည် ဤဝန်ဆောင်မှုကို တတ်နိုင်သမျှ ပြီးပြည့်စုံစေရန်အတွက် ဒစ်ဂျစ်တယ်ကိရိယာများစွာကို အားကိုးသည်-
လူနာစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုခြင်းများအတွက်လျှောက်လွှာများ, ရှိသည်လိမ့်မယ် စိတ် သင်၏အစားအသောက်
နည်းပညာဆိုင်ရာရှုထောင့်ကို သုံးသပ်ကြည့်လျှင် ဤဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားသည် အားသာချက်များစွာရှိပြီး ထို့ကြောင့် ၎င်းကို မကြာသေးမီအချိန်များတွင် ပိုမိုလက်ခံကျင့်သုံးလာခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင်၊ ဤဝန်ဆောင်မှုအမျိုးအစားသည် ရက်ချိန်းယူရန် လူနာနှင့် အာဟာရပညာရှင်သည် တစ်မြို့တည်းတွင်ရှိရန် မလိုအပ်ကြောင်း ဆိုလိုသည်။ အားကစားအာဟာရပညာရှင် unimed.
Larissa Scharf သည် ရနံ့ကုထုံးတွင် အထူးပြုထားသော အာဟာရပညာရှင်နှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်ပြီး လူကိုယ်တိုင်နှင့် အွန်လိုင်းတွင် တက်ရောက်နေသည့် ဆေးခန်းအာဟာရ၊ အားကစားနှင့် phytotherapy ဆိုင်ရာ ဘွဲ့လွန်ဘွဲ့ရတစ်ဦးဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်လိုသော သူများအတွက် အာဟာရဖြစ်စေပါတယ်။ အလေးချိန်တိုးလာသည် သို့မဟုတ် ပိန်စေခြင်း၊ ဤပညာရှင်သည် အကွာအဝေး တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကို ရှာဖွေနေလျှင် ပို၍ပင် အကောင်းဆုံး လက္ခဏာဖြစ်သည်။
သဘောတူညီချက်ဖြင့်အလုပ်လုပ်သောအားကစားအာဟာရပညာရှင်ကိုရှာဖွေလိုသူများအတွက်ရွေးချယ်စရာများထဲမှတစ်ခုမှာ Unimed မှတဆင့်ဖြစ်သည်။
ကျန်းမာရေးအစီအစဥ်ကုမ္ပဏီသည် အားကစားနယ်ပယ်တွင် အလုပ်လုပ်သော အထူးကောင်းမွန်သော အာဟာရပညာရှင်များနှင့် သဘောတူညီချက်တစ်ခုရှိပြီး သင်၏နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သောရလဒ်များကို အာမခံပေးမည်ဖြစ်သည်။
အာဟာရပညာရှင်က ဘယ်လိုမျိုး ညွှန်းနိုင်မလဲ။ အာဟာရဖြည့်စွက်စာများတွင် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သည် ၎င်း၏အရည်အချင်းနယ်ပယ်ထက် မကျော်လွန်ကြောင်း သေချာစေရန် Federal Nutrition Council မှ အမြဲလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပါသည်။
အာဟာရပညာရှင်တစ်ဦးသည် အောက်ပါတို့ကို အခြေခံသည့် ဖြည့်စွက်စာ ဖြည့်စွက်စာများ ညွှန်ကြားနိုင်သည်။
Prebiotics နှင့် Probiotics
ပျားရည်၊ ပရိုပိုလစ်၊ တော်ဝင်ဂျယ်လီနှင့် ပန်းဝတ်မှုန်ကဲ့သို့သော ပျားထုတ်ကုန်များ
အစားအသောက်အသစ်များနှင့် ပါဝင်ပစ္စည်းများအသစ်နှင့် အခြားလုပ်ငန်းမှ အခွင့်အာဏာရှိသည်။ ဗီဇာ တစ်ဦးတည်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ရောင်းချရန်
ဗီတာမင်၊ သတ္တုဓာတ်၊ အမိုင်နိုအက်ဆစ်နှင့် ပရိုတင်းများကို အခြေခံ၍ အရောင်းဆိုင်တွင် ဆေးဝါးများ အချင်းချင်း ခွဲထုတ်ခြင်း သို့မဟုတ် ပေါင်းစပ်ထားခြင်း၊
>>> ဖတ်ရန် ညနေခင်း Primrose ရေနံ - ဤအစွမ်းထက်သောဆီအကြောင်းလေ့လာပါ။
ဘယ်အချိန်မှာ အာဟာရပညာရှင်ကို ရှာရမလဲလူတစ်ဦးသည် ၎င်းတို့၏ခန္ဓာကိုယ် သို့မဟုတ် အလှအပရေးရာနှင့် ပတ်သက်သည့် ပြဿနာများအတွက်ဖြစ်စေ သို့မဟုတ် ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ အကြောင်းပြချက်များအတွက် အာဟာရပညာရှင်ကို အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များဖြင့် ရှာဖွေနိုင်သည်။
ဤသည်မှာ ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် ဒေသရှိ ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်ကို ရှာဖွေနေသူများဖြစ်သည်။ ကိုယ်အလေးချိန်တက်လာကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့၊ ဒါမှမဟုတ် ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ ရောဂါရှိတာမျိုး၊ ဆီးချိုရောဂါသို့မဟုတ် သက်ကြီးရွယ်အို ကဲ့သို့သော အာရုံစူးစိုက်မှု ပိုရှိသော အသက်အုပ်စုတွင် ရှိနေခြင်း။
ကိုယ်အလေးချိန် လျှော့ချလိုသူများအနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ဇီဝအမျိုးအစားနှင့် လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားကာ ၎င်းတို့၏ စံပြကိုယ်အလေးချိန် အတိုင်းအတာကို ဆုံးဖြတ်နိုင်စေရန် အာဟာရပညာရှင်နှင့် လမ်းညွှန်ရန် လိုအပ်ပါသည်။
ထို့အပြင်၊ သူသည် သင့်အား ကိုယ်အလေးချိန်လျှော့ချရန်သာမက အစားအသောက်ပြန်လည်သင်ကြားခြင်းမှတစ်ဆင့် ရေရှည်တည်တံ့သောနည်းလမ်းဖြင့် ကိုယ်အလေးချိန်ကို ထိန်းသိမ်းရန် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းများကို ပြသမည်ဖြစ်သည်။
Dr. Larissa Scharf ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကိုယ်အလေးချိန် အာဟာရပညာရှင်
ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် ကြွက်သားထုထည်များလာခြင်းသည် လူများစွာအတွက် မကြာခဏ ပြဿနာတစ်ခုဖြစ်ပြီး ကယ်လိုရီများစွာကို အပြင်းအထန် လေ့ကျင့်ပြီး စားသုံးမိသည့်တိုင် လိုချင်သောကိုယ်အလေးချိန် သို့မဟုတ် မျှော်မှန်းထားသည့် ကြွက်သားများကို မရောက်နိုင်ပါ။
အာဟာရပညာရှင်တစ်ဦးနှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းသည် သင့်အား မည်သည့်အစားအစာများ စားသုံးရန် လိုအပ်ပြီး သင့်ရည်မှန်းချက်များ အမှန်တကယ်အောင်မြင်ရန် မည်မျှပမာဏရှိသင့်သည်ကို ပြသနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ပရိုတင်းနှင့် ကယ်လိုရီ မြင့်မားသော ဖြည့်စွက်စာများ ကဲ့သို့သော ဖြည့်စွက်စာများ စားသုံးရန် ညွှန်းနိုင်သေးသည်။
Dr. Larissa Scharf ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဟာရပညာရှင်သည် အစုလိုက်အပြုံလိုက် အမြတ်ကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
အမျိုးအစား 1 သို့မဟုတ်2ဆီးချိုရောဂါရှိသူတစ်ဦးသည် မှန်ကန်သောအစာမကျွေးပါက ရောဂါကိုထိန်းချုပ်ရန် ဆိုးရွားသောပြဿနာများရှိနိုင်သည်။
ထို့ကြောင့် အစားအသောက်စားသုံးမှုသည် လူနာအတွက် မဟာမိတ်ဖြစ်သင့်ပြီး ထို့ကြောင့် အာဟာရပညာရှင်တစ်ဦးသည် ၎င်း၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသော မီနူးတစ်ခုကို ပြင်ဆင်ပေးမည်ဖြစ်သောကြောင့် ပိုမိုကောင်းမွန်သော glycemic ထိန်းချုပ်မှုကို သေချာစေသည်။
Dr. Larissa Scharf ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အမျိုးအစား 1 နှင့်2ဆီးချိုရောဂါကိုအာရုံစိုက်သောအာဟာရပညာရှင်
ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများသည် ဤအလွန်အရေးကြီးသောအချိန်ကာလအတွင်းတွင် တိကျသောအာဟာရဓာတ်များလိုအပ်ပြီး ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အစားအစာနှင့် ၎င်းတို့၏ဝမ်းဗိုက်အတွင်း ကလေးကြီးထွားမှုအတွက် တာဝန်ရှိသည်။
ထို့ကြောင့်၊ အာဟာရပညာရှင်တစ်ဦးသည် ဤအထူးအချိန်ကာလအတွင်းတွင် သင်တို့နှစ်ဦးစလုံး ကျန်းမာနေစေရန်အတွက် စံပြအစားအစာအစီအစဉ်ကို ဖန်တီးမည်ဖြစ်သည်။
Dr. Larissa Scharf ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဟာရပညာရှင်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
အစားအသောက်နှင့် ဂရုစိုက်မှု ပိုလိုအပ်သော ဘဝ၏ အဆင့်များထဲမှ တစ်ခုမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုများဖြစ်သည်မှာ သေချာပါသည်။
အာဟာရပညာရှင်သည် သက်ကြီးရွယ်အိုများ၏ လက္ခဏာများကို သိရှိနိုင်စေရန်အတွက် စောင့်ကြည့်ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။ အိုမင်းခြင်းကယ်လ်စီယမ်၊ ဗီတာမင် D သို့မဟုတ် သံဓာတ် စားသုံးမှု တိုးလာသကဲ့သို့ပင်။
>>> ဖတ်ရန် Dukan အစားအစာ
ဤအရာအားလုံးသည် ဤကာလအတွင်း လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ ကျန်းမာသန်စွမ်းပြီး ပိုမိုကောင်းမွန်သော ဘဝအရည်အသွေးကို ပေးစွမ်းနိုင်စေရန် သေချာစေရန်။
Dr. Larissa Scharf ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အာဟာရပညာရှင်
အားကစားလုပ်သည်ဖြစ်စေ အားကစားလုပ်သည်ဖြစ်စေ အပန်းဖြေရန်ဖြစ်စေ ပြိုင်ပွဲအတွက်ဖြစ်စေ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေ့ကျင့်သူတိုင်းသည် ၎င်းတို့၏ပန်းတိုင်များကို ရည်မှန်းထားသည့် အထူးပြုအစားအစာလိုအပ်ပါသည်။
အာဟာရပညာရှင်သည် သင့်လက်ရှိအခြေအနေနှင့် သင့်တွင်ရှိသော အာဟာရလိုအပ်ချက်များကို အကဲဖြတ်မည်ဖြစ်ပြီး ပြီးပြည့်စုံသော အစားအသောက်အစီအစဉ်ကို ဖန်တီးကာ တိကျသောအစားအစာဖြည့်စွက်စာများကိုပင် ညွှန်းပေးမည်ဖြစ်သည်။
Dr. Larissa Scharf ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ gym အာဟာရပညာရှင်နှင့် အားကစားအာဟာရပညာရှင်
ဆေးရုံအခြေအနေရှိလူနာတစ်ဦးသည် အပြည့်အဝပြန်လည်ကောင်းမွန်လာစေရန်အတွက် လုံလောက်သောအာဟာရလိုအပ်ပါသည်။
အာဟာရပညာရှင်က ကူညီတယ်။ ဓါတ်ကိုထိန်းသိမ်း လူနာ၏ကုသရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုလွယ်ကူစေသည်, ရှောင်ကြဉ်ပါ။ ကိုယ်အလေးချိန်ကျခြင်း။ ကြွက်သားများနှင့် အာဟာရပြည့်ဝသော အာဟာရကို အာမခံသည် ၊ လူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ၎င်းတို့၏ အစားအသောက်များမှ အခြားမရှိမဖြစ်အချက်များအပြင်၊
Dr. Larissa Scharf ပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အာဟာရ ပညာရှင် သည် ဆေးရုံ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကို အာရုံစိုက် သည်။
အာဟာရပညာရှင်ထံ ဘယ်လိုသွားမလဲ။ ? အာဟာရပညာရှင်နှင့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုသည် လူတွေ့စစ်ဆေးခြင်း သို့မဟုတ် anamnesis ဖြင့် အစပြု၍ လူနာနှင့်ပတ်သက်သော အချက်အလက်များဖြစ်သည့် ကျန်းမာရေးပြဿနာများနှင့် လူတစ်ဦးချင်းစီ၏ လက်ရှိစားသောက်မှုဆိုင်ရာ အသိပညာများကဲ့သို့သော လူနာနှင့်ပတ်သက်သည့် အချက်အလက်များကို သင်ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။
ထို့အပြင်၊ အာဟာရပညာရှင်သည် လူနာအား ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် အရပ်၊ အရေပြားခေါက်များအပြင် ကိုယ်အလေးချိန်နှင့် အရပ်အမောင်းတို့ကို စစ်ဆေးရန် လူနာအား ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးမှုပြုလုပ်သည်။ အဆီရာခိုင်နှုန်း.
ဒါတွေအားလုံးဟာ လူနာရဲ့ ကိုယ်အလေးချိန်နဲ့ ကျန်းမာရေးအခြေအနေကို သိနိုင်စေဖို့ စားသောက်မှုအလေ့အထနဲ့ သူအောင်မြင်ချင်တဲ့ ပန်းတိုင်တွေကို အခြေခံပြီး အစားအသောက်အစီအစဉ်ကို ရေးဆွဲနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထို့နောက် ပထမအကြိမ်သွားရောက်လည်ပတ်မှုတွင်ရရှိသော ဤအချက်အလက်များအပေါ်အခြေခံ၍ လူနာ၏အာဟာရပန်းတိုင်များရောက်ရှိရန် အချိန်မည်မျှကြာမည်ကို ခန့်မှန်းခြင်းဖြင့် အထူးပြုအစားအစာအစီအစဉ်ကို သတ်မှတ်ပြီး လူနာထံပေးပို့ပါသည်။
အချို့သောအခြေအနေများတွင်၊ ပရော်ဖက်ရှင်နယ်သည် လူနာ၏သွေးတွင်းဂလူးကို့စ်နှင့် ကိုလက်စထရောအဆင့်များကဲ့သို့သော တိကျသောအချက်အလက်များရရှိရန် ဓာတ်ခွဲခန်းစစ်ဆေးမှုများကို တောင်းဆိုနိုင်ပြီး ယင်းနံပါတ်များ၏ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ကို အချိန်နှင့်အမျှ စောင့်ကြည့်နိုင်သည်။
သင်တွေ့မြင်ရသည့်အတိုင်း အာဟာရပညာရှင်သည် ကျန်းမာရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသော ပညာရှင်တစ်ဦးဖြစ်သောကြောင့် လူနာကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာ စားသောက်ရန်နှင့် တိကျသောပန်းတိုင်များဖြစ်သည့် ကြွက်သားအစုလိုက်အပြုံလိုက်ရဖို့ ou ကိုယ်အလေးချိန်.
ဤစာသားတွင်၊ အားကစားနှင့် လုပ်ငန်းဆောင်တာများ အာဟာရအလုပ်လုပ်ပုံတို့အပြင် မတူညီသောအခြေအနေများတွင် အာဟာရပညာရှင်တစ်ဦးကို ရှာဖွေခြင်း၏ ညွှန်ပြချက်များအကြောင်း သင်ပိုမိုသိရှိလာခဲ့သည်။
Functional vs Sports Nutrition | ယနေ့ဆောင်းပါးကို သင်နှစ်သက်ပါသလား။ အာဟာရပညာရှင်ဆီ မသွားခင် ကွာခြားချက်ကို သိပါသလား။
Tags:အာဟာရပညာရှင်က ကိုယ်အလေးချိန်ကျဖို့ ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲ။အာဟာရပညာရှင်တစ်ဦးသည် သင့်အား ကြွက်သားထုထည်ရရှိရန် မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်း။အွန်လိုင်းဝန်ဆောင်မှုဖြင့် အာဟာရပညာရှင်အမျိုးအစား 1 နှင့်2ဆီးချိုရောဂါကိုအာရုံစိုက်သောအာဟာရပညာရှင်ကိုယ်အလေးချိန် အာဟာရပညာရှင်ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းနှင့် ကိုယ်အလေးချိန်တိုးခြင်းများကို အဓိကထား အာဟာရပညာရှင်အာဟာရပညာရှင်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးများကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။သက်ကြီးရွယ်အိုများအတွက်အာဟာရပညာရှင်အာဟာရ ပညာရှင် သည် ဆေးရုံ ပြန်လည် ထူထောင်ရေး ကို အာရုံစိုက် သည်။အားကစားအာဟာရဓာတ်အားကစားအာဟာရပညာရှင် unimedအားကစားခန်းမအတွက်အာဟာရပညာရှင်အာဟာရပညာရှင်သည် အွန်လိုင်းတွင် တက်ရောက်နိုင်ပါသည်။အားကစားအာဟာရဆိုတာဘာလဲFunctional Nutrition ဆိုတာ ဘာလဲ။အာဟာရပညာရှင်က ဘယ်လိုမျိုး ညွှန်းနိုင်မလဲ။သဘောတူညီချက်နှင့် ကိုက်ညီသော အာဟာရပညာရှင်ကို မည်သည့်နေရာတွင် ရှာရမည်နည်း။ဘယ်အချိန်မှာအာဟာရပညာရှင်ကိုရှာရမလဲ